Raha mikaroka karazan-java-borona iray vaovao, ny mpamboly dia mahafantatra tsara ny osmocote amin'ny vongan-drano. Na ny endriny sy ny endriny aza dia mahagaga ny zaridaina za-draharaha, satria ireny dia tsy granule kely na fitombenana tsotra, endrika vita amin'ny rivotra, ary akanjo ambony amin'ny akorany manokana. Tsy maintsy miaiky isika fa manana tombontsoa lehibe ny Osmocot mpanafika amin'ny akanjo lava lehibe.
Torolalana ho an'ny fofona Osmocot
Mba hijerena akaiky kokoa an'ity fanavaozana ity eo amin'ny tsenantsika, mora kokoa ny mampiasa lisitra kely izay ahitanao ny vaovao lehibe sy manan-danja momba ity vokatra ity:
Rehefa manomboka mijery kitapo miaraka amin'ny grenady boribory ianao dia hahita olana toy izao: ny rehetra dia hanana soratra iray, fa ny votoaty kosa dia mazava amin'ny loko samihafa. Tsy fanilikilihana momba ny hosoka hita, fa ny fonosana amin'ny fiainana andavanandro. Ilaina ny filazana toy izany ho an'ireo tranga ireo raha toa ka ilaina ny fiakarana an-tampony sy mavitrika mandritra ny vanim-potoana iray, izany dia manamora ny asa. Ankoatr'izay, ny fohy kokoa ny faharetana, ireo sakafo fanampiny dia hiditra ao amin'ny tany. Noho izany, amin'ny fomba samihafa amin'ny fitomboanao dia afaka mandray ny vahaolana.
Ny akanjo Osmocote dia manana fahasamihafana goavana eo amin'ny resaka fitsirihana ny tany. Ny baolina rehetra ao anaty fonosana dia rakotra miaraka amin'ny fihodinana izay manara-maso ny famatsian-tsakafo. Rehefa manondraka ilay zavamaniry ianao, dia mampihena tsikelikely ny ao anatiny ny rano, avy eo, noho ny faneriterena osmotika, dia miditra amin'ny tany izy. Ny famonoana ny akorandriaka dia marika fa efa voakilasy avokoa ny zavatra rehetra.
Raha ny fampiasana orkide Osmocot no ampiasaina, dia azo ampiharina eto ny toro-hevitra ankapobeny ary ny grika miaraka amin'ny fe-potoana maimaim-poana maharitra mihoatra ny fito volana dia azo atao. Noho izany dia ho tonga moramora ny sakafo. Ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny orkide dia ny Osmocot miteraka amin'ny fe-potoana 12-14 volana.
Ny vaovao mahafaly dia ny fahafahana hampihatra ny fofona Osmocot amin'ny fomba maro. Ireo kofehy dia mifangaro amin'ny tany mandritra ny fotoam-pambolena, mandatsaka mivantana any amin'ny lavaka, ary manao lavaka tsirairay eo akaikin'ny tany. Ny fomba fampidirana sy ny fampiharana amin'ny endriny dia azo ampiasaina tsara, satria ny fahatsorana dia misy endriky ny pellets misy kônôma izay ampidirinao ao anaty tany ara-bakiteny. Izany rehetra izany dia ahafahana mampihatra ny fananganana ny taranaka vaovao na eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fambolena.
Fiompiana - fiomanana amin'ny ririnina, taona voalohany
Apetraka eo amin'ny lohataona Apple - fitsipika sy fitsipika fototra ho an'ny mpandray anjara
Clerodendrum - fikarakarana tokantrano
Famolavolana voaloboka voaloboka
Penstemon - mitombo avy amin'ny voa
Fambolena plumes eny an-kalamanjana amin'ny lohataona
Ny tsara sy ratsy dia ratsy
Fitafiana miaramila - lamaody ankafizin'ny ankafiziko, fanatanjahan-tena sy fanatanjahantena
Sakafo tsotra miaraka amin'ny kalsioma - solika mahazatra ho an'ny sakafo sns
Miomàna amin'ny "Rad" amin'ny tanan'ny tanana
Tavy ho an'ny rambony
Afaka mipetrapetraka ao anaty fandriana tsy misy lamba rongony ve aho?
Ahoana no tsy hitondran'ny lehilahy iray?
Volom-borona tsara dia tsara sy ratsy
Adriana Lima no nitantana ny Met Gala 2017 tao amin'ny orinasa iray atao hoe Julian Edelman
Fiaramanidina fitaterana entona
Erogonomia amin'ny famolavolana
Andro iraisam-pirenana iraisam-pirenena